डा. केसीलाई सरकारको सुझाव, ‘माग पूरा भएको खुशियाली मनाउनुस्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग पूरा भइसकेकाले अब संसदीय व्यवस्थाप्रति परिचित प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई बारम्बार कोट्याइरहन उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
'प्रतिपक्षीले अब बारम्बार यो विषयलाई पिलो कोट्याएजस्तो नगरौँ, उहाँको विषय सकियो । हामी अनुरोध गछौँ ‘डा साबले अब माग पूरा भएको खुशियालीमा अनशन छोड्नुस्’ उक्साउनेको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।”
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको कार्यान्वयनका लागि अगुवाइ गरेर जनताको सेवामा सिटामोल र मलमपट्टी बोकेर जानु डा.केसीको महानता हुने सुझाव दिए ।
आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै डा.केसी २३ दिनदेखि अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ । केसीले पुराना सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउनुपर्नेलगायत माग उठाएका छन् ।
केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १९:३१
काठमाडौँ — पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वका दुई राप्रपाबीच शुक्रबार एकताको घोषणा हुने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) बीच बिहीबार एकीकरणको आधारपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै एकताको टुंगो लागेको हो ।
एकीकरणपछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) राख्ने सहमति बनेको छ । चुनाव चिह्न 'हलो' हुने भएको छ ।
पार्टी एकता घोषणाका लागि शुक्रबार दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम तय गरिएको छ । एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्मका लागि समान हैसियतमा दुई अध्यक्ष रहने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले एकीकरण गर्न लागिएको नेताहरुले बताएका छन् । एकीकृत पार्टीको वैचारिक आधार राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद हुने उल्लेख छ । नीति र सिद्धान्त भने सबै धर्मबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सांपेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, उदार अर्थत्नत्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति हुने जनाइएको छ ।
महाधिवेशनसम्म पार्टीको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि दुवै अध्यक्ष रहेको निर्देशन समिति बनाइने छ ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १९:२२